Mariela Carril | | ကြည့်ဖို့ဘာလဲ, Tokio
Tokio ၎င်းသည်ကမ္ဘာ့မြို့တော်ကြီးတစ်ခုဖြစ်သည်။ လူများ၊ လှုပ်ရှားမှုများ၊ ခရီးသွား possibilities ည့်သည်များနှင့်တုန်ခါနေသောမြို့တစ်မြို့ဖြစ်သည်။ နွေရာသီ၊ ဆောင်းရာသီ၊ နွေ ဦး ရာသီသို့မဟုတ်ဆောင်း ဦး ရာသီများတွင်သင်သွားခြင်းရှိမရှိအရေးမကြီးပါ။ လုပ်စရာတစ်ခုခုအမြဲရှိတယ်။
ယခုနှစ်ပေါင်းနှစ်ဆယ်အဘို့ ခရီးသွားလုပ်ငန်းကြီးထွားလာသည် ယနေ့သင်တို့သည်လမ်း၌ရှောက်သွားစဉ်၊ ဤလောက၏ဘာသာစကားရှိသမျှတို့ကိုကြားရကြမည်။ ထို့ကြောင့်တိုကျိုလူမျိုးများသည်ပိုမိုပွင့်လင်း။ လူမှုရေးအရပိုမိုပွင့်လင်းမြင်သာလာပြီးသင်ထိုတွင်မရှိသေးပါကပျော်မွေ့ရန်အချိန်ကောင်းဖြစ်သည်။
ဒီနေ့က တိုင်းပြည်၏မြို့တော် ဒါကြောင့်အစဉ်အမြဲမဟုတ်ခဲ့ပေမယ့် ၎င်းသည်ဖြစ်နိုင်လျှင်အချိန်တိုင်းပြောင်းလဲသောမြို့တစ်မြို့ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကသင်ပြန်လာသည့်အခါသင်ပြောင်းလဲမှုများစွာတွေ့လိမ့်မည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က Shibuya ဘူတာအနီးရှိကျောက်တုံးများနှင့်ဆိုင်ခန်းများသို့မဟုတ်အရက်ဆိုင်ငယ်များသည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင်ကျွန်ုပ်သွားခဲ့ဖူးသည်။ သူတို့ ၂၉၁၉ တွင်မရှိခဲ့ပါ။
အမှန်မှာတိုကျိုသည်လူများစွာ၊ မြို့တွင်နေထိုင်သူများနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်မှအလုပ်လုပ်ရန်လာရောက်နေထိုင်သောမြို့ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အလွန်မြင့်မားပြီးထူးဆန်းသောအဆောက်အအုံများရှိသော်လည်းမိုးမျှော်တိုက်များစွာရှိသည့်နေရာမဟုတ်ပါ။ တစ်ခါတုန်းကအဲဒါဟာ“ မြို့ကြီးတစ်မြို့” နဲ့တူတယ်လို့ကျွန်တော်ဖတ်ပြီးအဲဒီဖော်ပြချက်ကတော်တော်လေးကိုတော်တယ်။ ၎င်းသည်မြင့်သောမြို့မဟုတ်၊ ကြီးမားသောမြို့တစ်ခုဖြစ်သည်။
ဘယ်တော့တိုကျိုကိုသွားသင့်သလဲ ကောင်းပြီကျိန်းသေငါ၏အပုဂ္ဂိုလ်ရေးအတွေ့အကြုံအပေါ်အခြေခံပါတယ် နွေရာသီမှာမသွားနဲ့။ ကျွန်ုပ်ရာသီသည်ယခုရာသီတွင်ပူပြင်းပြီးစိုစွတ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်ကိုထိခိုက်လိမ့်မည်မဟုတ်ဟုထင်သော်လည်း၊ တိုကျိုသည်စာသားမီးဖိုတစ်ခုဖြစ်သည် အပူနှင့်စိုစွတ်သော ပြီးတော့ပတ်ပတ်လည်ရန်အလွန်မသက်မသာဖြစ်ပါတယ်။ အနည်းဆုံးတော့တိုကျိုမှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ရင်နွေရာသီမှာမသွားပါနဲ့။
တိုကျိုသို့လည်ပတ်ရန်အကောင်းဆုံးလမှာဖြစ်သည် swimsuit။ နေ, နွေးထွေးမှု, ရှည်လျားသောနေ့ရက်များ။ နောက်မှ ဆောင်း ဦး လည်းအလွန်ကောင်းပါတယ် ဆောင်းရာသီတွင်ရက်တို။ အေးခဲသောညများရှိသော်လည်းအလွန်နေသာသည်။ သူကပြောနေတာ, သင်တိုကျို၌အဘယ်သို့ပြုနိုင်သနည်း
မြို့တော်တွင်ကြည့်ရှုရန်နှင့်လုပ်ရန်အရာများစွာရှိပြီး၎င်းသည်သင်၏အရသာအပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ခရီးတစ်ခုတည်းကမလုံလောက်ပါ၊ သို့သော်တိုကျိုကိုပထမဆုံးအကြိမ်သင်မလွဲမရှောင်သာနေရာအချို့ကိုသင်စဉ်းစားနိုင်သည်။
ဒီတော့စကြရအောင် တိုကျိုအတွက်ဂန္ခရီးသွား attractions ည့်ဆွဲဆောင်။ ထဲမှာ တိုကျိုအလယ်ပိုင်း သူတို့ဖြစ်ကြသည် perကရာဇ်ဥယျာဉ်များအလယ်ခေတ်ကအဲဒိုရဲတိုက်၏ပန်းခြံဟောင်းဖြစ်သည်။ အခမဲ့ ၀ င်ရောက်နိုင်ပြီးကျုံးများ၊ နံရံများ၊ ကန်များနှင့်အဆောက်အအုံဟောင်းများကိုတွေ့ရလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်ကြီးမားသောသဘောတူညီမှုတစ်ခုမဟုတ်သော်လည်းအနည်းဆုံးပထမခရီးစဉ်တွင်သင်မမှတ်မိသင့်ပါ။ တစ်ယောက်တည်းသွားရန်တိုကျိုဘူတာသို့ရောက်ရှိပြီးလမ်းလျှောက်နိုင်သည်။
အဟိကဘာရာ ၎င်းတွင်ကိုယ်ပိုင်မီးရထားဘူတာရှိသော်လည်းတိုကျိုအလယ်ပိုင်းတွင်လည်းရှိသည်။ သူလား အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများနှင့်အိုတက္ကတ်ပစ္စည်းများ ဒီတော့အများပြည်သူဟာအီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းတွေရှာဖွေနေတဲ့သူတွေနဲ့ကမ္ဘာအနှံ့ကမဂ္ဂဇင်းတွေ၊ အရုပ်တွေနဲ့ရှာဖွေသူတွေကြားမှာကွဲပြားနေတယ် ရောင်းကုန်ပစ္စည်းများ သင်အကြိုက်ဆုံး anime စီးရီးသို့မဟုတ် manga မှ။ တနင်္ဂနွေနေ့များ၏အဓိကလမ်းမကြီးဖြစ်သော Chuo Dori သည်ညနေ ၁ နာရီမှ ၆ နာရီအကြားလမ်းလျှောက်သူကိုလှည့်ပေးသည်။
အပိုင်း တိုကျို၏မြောက်ဘက် တိုကျိုတွင်ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်ထိပ်တန်းဆွဲဆောင်မှုများလည်းရှိသည်။ Asakusa ရိုးရာရပ်ကွက်ဖြစ်ပါတယ် နှင့် Sensoji ၏ဗုဒ္ဓဘာသာဘုရားကျောင်း၎င်း၏အဓိကဆွဲဆောင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းသည် ၇ ရာစုမှစတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးအမှတ်တရပစ္စည်းအရောင်းဆိုင်များဖြင့်စီတန်းထားသောလူကူးလမ်းဖြစ်သော Nakamise ကို ဖြတ်၍ သွားလာခြင်းဖြစ်သည်။ သင်နာရီဝက်လည်ပတ်မှုအတွက်လည်းငွေပေးနိုင်သော်လည်းလမ်းလျှောက်ရန်ရပ်ကွက်တစ်ခုဖြစ်သည် အချစ်ရယ် လူနှစ်ယောက်အတွက်ယန်း ၉၀၀၀၊ ဒေါ်လာ ၉၀ လောက်။
Asakusa အတိတ်တွင် Kabuki ရုပ်ရှင်ရုံများ၊ ပြည့်တန်ဆာများနှင့်မာဖီးယားဂိုဏ်းများရှိသော်လည်းဒုတိယကမ္ဘာစစ်၏ဗုံးပေါက်ကွဲမှုကြောင့်များစွာဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးပြန်လည်ရှင်သန်မှုသည်ပိုမိုငြိမ်းချမ်းလာခဲ့သည်။ ဒီမှာလမ်းလျှောက်ပြီးတာနဲ့သင်လည်းလုပ်နိုင်ပါတယ် Sumida မြစ်ပေါ်တွင်လှေတစ်စီးစီး။ Odaiba သို့သွားပါ ဖြစ်စေတံတားဖြတ်ကူးနှင့် တိုကျို Skytree သွားရောက်ကြည့်ရှု။ သင်လုပ်နိုင်လျှင်နှစ်ခုလုံးလည်ပတ်ပါ။ အပျော်စီးသင်္ဘောသည်ချစ်စရာကောင်းသော၊ မည်သည့်သင်္ဘောပဲဖြစ်ပါစေ၊ တိုကျိုနှင့် ပတ်သက်၍ သင်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအမြင်ရှိသည်။
y el တိုကျို Skytree ဒါကအံ့မခန်းဖွယ်ရာအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ နေနှင့်အတူသွားပြီးနေဝင်ချိန်တွင်နေသင့်သည်။ သင်ကအာကာသယာဉ်တစ်စင်းထဲ၌ရှိနေသည်ဟုထင်ရသည်။ ညစာအတွက်စားလို့ကောင်းတယ်၊ 450 မီတာ ဒုတိယабсерваторထံမှ။ ချစ်စရာလေး။ နံနက် ၈ နာရီမှည ၁၀ နာရီအထိဖွင့်သည်။ နိုင်ငံခြားသားများအတွက်လေ့လာရေးဌာနနှစ်ခုလုံးအတွက်ယန်း ၄၂၀၀၊ ၄၃ ဒေါ်လာခန့်ရှိသည်။
သင်ဒီမှာမြောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ပြတိုက်ကိုကြိုက်လျှင် အဲဒိုပြတိုက် - တိုကျိုနှင့်တိုကျိုအမျိုးသားပြတိုက်။ ဒီမြို့ရဲ့ဒီtoရိယာကိုဘယ်လိုသွားမလဲ။ အကယ်၍ သင့်မှာ Japan Rail Pass ရှိပါကမက်ထရို၊ အခြေခံအားဖြင့်ရထားနှင့်မက်ထရိုကိုပေါင်းစပ်ခြင်းအားဖြင့်။
အနောက်ဘက်တွင်ပါတီဖြစ်သည်။ ရိုးရှင်းပါတယ် အကယ်၍ သင်နေရာထိုင်ခင်းရှာရန်လိုပါကတိုကျိုအနောက်ပိုင်းရှိဟိုတယ်တစ်ခုသို့မဟုတ်တိုက်ခန်းတစ်ခန်းသို့မဟုတ်တည်းခိုခန်းကိုအမြဲရွေးချယ်ပါ။ Shinjuku, Shibuya, Harajuku။ အကယ်၍ သင်သည်ည၊ လူ၊ လူငယ်များ၊ စျေးဆိုင်များ၊ အရက်ဆိုင်များ၊ စားသောက်ဆိုင်များကိုရှာဖွေနေသည်ဆိုပါကဤနေရာသည်အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်ပြီးဤနေရာတွင်တည်းခိုခြင်းသည်သင့်အနီးအနားရှိအရာအားလုံးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ပြီးသင်အများကြီးမရွှေ့သင့်ပါ။ တိုကျိုတစ်ခွင်လုံးတိုက်ခန်းအငှားပြီးတဲ့နောက်လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်ကကျွန်တော်တို့ Shibuya ကနေ ၁၀ မိနစ်ငှားပြီးအဲဒါကအကောင်းဆုံးလုပ်ခဲ့တာပဲ။ နေရာတိုင်းမှာခြေကျင်။
Shibuya သည်လူငယ်ခရိုင်ဖြစ်သည် ထူးချွန်မှု။ နေရာတိုင်းတွင်ကြီးမားသောစျေးဆိုင်များ၊ အရက်ဆိုင်များနှင့်စားသောက်ဆိုင်များရှိပြီးနှစ်သစ်ကူး၊ ခရစ်စမတ်သို့မဟုတ်ဟယ်လိုဝိန်းပွဲတော်ကိုကျင်းပကြသည်။ အဆိုပါ multitudinous Hachiko ထွက်ပေါက်ရှေ့တွင်လမ်းဆုံလမ်းခွ ဘူတာရုံမှကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင်လူကြိုက်များသည်။ နေ့ရောညပါဖြတ်ကူးခြင်းကိုသင်မရပ်နိုင်ပါ။ တကယ်တော့ဒီနေရာဟာဒီအပိုင်းထက်အများကြီးပိုပါတယ်။ ပတ်ပတ်လည်လမ်းလျှောက်ဖို့၊ ထွက်ခွာဖို့နဲ့ပျောက်ဆုံးဖို့သင်ဝံ့ဖို့လိုပါတယ်။
ယခုနှစ်တွင်ကျွန်ုပ်မသိသောဘုရားများနှင့်ထောင့်များကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ Shibuya စမ်းချောင်း, 2018 ခုနှစ်တွင်ဖွင့်လှစ်, မြေပြင်ကပေါ်ထွက်လာခြင်းနှင့်ပတ်ပတ်လည်လမ်းလျှောက်လူသွားလမ်းရှိသည်နှင့်ဘူတာရုံများ၏ရှေ့မှောက်၌သေးငယ်တဲ့ရှုထောင့်နှင့်ထိုသေးငယ်တဲ့ရှုထောင့်နှင့်အတူသောမြစ်၏ဘေးမှာအရက်ဆိုင်သုံးခုနှင့်စားသောက်ဆိုင်နှင့်ရုံးခန်းများနှင့်ရုံးများနှင့်အတူဖွင့်လှစ်, ငါမ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါအရင်ကမတွေ့ဖူးဘူး
သင်၏မှတ်ဉာဏ်တွင်ကျန်ရှိနေသည့်ရုပ်ပုံများကိုသင်ရှာဖွေနေပါကသွားပါ ညမှာ Shinjuku အလင်းနဲ့အလင်းကသင့်ကိုမျက်စိကန်းစေတယ်။ ၎င်းသည် Shibuya ထက် ပို၍ ကြီးသောခရိုင်ဖြစ်ပြီးကမ္ဘာပေါ်တွင်အလုပ်အများဆုံးရထားဘူတာတွင်ရှိသည်။ ခရီးသည်နှစ်သန်းသည်ဤတွင်နေ့တိုင်းဖြတ်သန်းသွားရပြီးပျောက်ဆုံးရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။ လာမည့်နှစ်တွင်ကျင်းပမည့်အိုလံပစ်အားကစားအတွက်ဆောက်လုပ်ဆဲဖြစ်သည်။ အရာအားလုံးရှိတယ်။ ဓာတ်လှေကားတွေထဲဝင်ပြီးမင်းသွားတဲ့နေရာကိုဘယ်မှာစားရမယ်၊ ဘယ်မှာသောက်ရမယ်ဆိုတာကိုသိမှာပေါ့။
အနောက်တိုင်းသားများကိုလမ်းပေါ်ရှိအရက်ဆိုင်များနှင့်စားသောက်ဆိုင်များတွင်သုံးလေ့ရှိသည်၊ သို့သော်ဤနေရာတွင်လက်တွေ့မတည်ရှိပါ။ ထို့ကြောင့်သင်အဆောက်အ ဦး ၏ဝင်ပေါက်ကိုသွားရန်၊ ကြမ်းပြင်တစ်ခုစီ၌ရှိသောနိမိတ်လက္ခဏာများကိုဖတ်ရှုပြီးသွားရန်ဝံ့ဝံ့ကြွားဝါးစွာကြိုးစားအားထုတ်သင့်သည်။ ဒါလွယ်ကူပါတယ်။ ဓာတ်လှေကားတံခါးဖွင့်လိုက်တာနဲ့မင်းကတခြားကမ္ဘာကိုတွေ့လိမ့်မယ်။ Shinjuku မှာလည်းရှိတယ် ရွှေပန်းစူပါအသေးစားအရက်ဆိုင်များနှင့်အတူကျဉ်းမြောင်းတဲ့လမ်းများ၏ရပ်ကွက်အတွင်း။
Golden Gai သည်ယနေ့ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွား is ည့်သည်တစ်ယောက်ဖြစ်သော်လည်းဂျပန်လူမျိုးသည်နိုင်ငံခြားသားများနှင့်စကားပြောဆိုရန်အဆင်သင့်ရှိပြီးအပြန်အလှန်အားဖြင့်စကားပြောရန်အဆင်သင့်ဖြစ်သောကြောင့်ထိုအချက်ကိုသိရန်သင့်သည်။ ထိုအရက်ဆိုင်အများစုသည်ထိုင်ရန်အတွက် ၇၀၀-၈၀၀-၁၀၀၀ ယန်းအားသွင်းသည်။ ဤအရက်ဆိုင်များသည်ည ၇ နာရီနှင့်နံနက်တိုင်းဖွင့်သည်။
တစ်နေ့တာအတွင်းသင်သွားရောက်နိုင်သည် ၎င်း၏ရှုထောင့်နှင့်အတူမြို့ပြအစိုးရရုံးများ, 243 မီတာ အခမဲ့ဝန်ခံချက်, ဒါမှမဟုတ် Shinjuku ပန်းခြံ။ နောက်ထပ်ပန်းခြံသည် Yoyogi ပန်းခြံ, အရူးအမူးဖြစ်သည့် Harajuku ရပ်ကွက်၊ လူငယ်ဖက်ရှင်နှင့်အလယ်ဗဟိုသို့လမ်းလျှောက်ပြီးနောက်နေ့တိုင်းသွားရန် cosplay.
ဒါ့အပြင်အနီးအနားမှာဖြစ်ပါတယ် Shin Okubo ရှိကိုရီးယားရပ်ကွက်။ ရထားနဲ့သွားနိုင်တယ်၊ လမ်းလျှောက်နိုင်တယ် k ပေါ့ ဤရွေ့ကားအရာအားလုံးသည်ယခုအချိန်တွင်ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားအမြောက်အများကိုလက်ခံရရှိခဲ့သောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ နေ့နှင့်ညပါနှစ် ဦး စလုံး။
ပြီးတော့ဘယ်အချိန်မှာရှာမလဲ တိုကျို၏တောင်ဘက်? ကောင်းပြီ, ၏ကြော့areaရိယာ Roppongi၊ တိုကျိုတာဝါနှင့် Odaiba ကျွန်း။ သင်မသိဘဲမနေပါနှင့်။ တိုကျိုတာဝါသည်ဂန္ထဝင်ဖြစ်ပြီး၎င်း၏အမြင့် ၃၃၃ မီတာ၊ ရှုထောင့်နှစ်ခုနှင့်ဆွဲဆောင်မှုများဖြင့်မဖယ်ထုတ်နိုင်ပါ။ ယခုလမှအချို့သောအပိုပစ္စည်းများပြီးစီးသွားသည်။ ထို့ကြောင့် အကယ်၍ သင်နောက်သို့သွားလျှင်မျှော်စင်သည်အသစ်ကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မည်။
Roppongi ၌တည်ရှိ၏ မောရီတာဝါ, Roppongi တောင်ကုန်းအလယ်၌တည်၏။ ဤအဆောက်အ ဦး သည်အမြင့် ၂၃၈ မီတာရှိပြီးအပေါ်ထပ်နှင့်မိုးလေဝသခွင့်ပြုချက်တို့ပါရှိသည် သင် helipad သို့သွားနိုင်သည်။ ငါအကြံပေးတယ်၊
ဤနေရာများကိုသိခြင်းဖြင့်သင်၏ပထမဆုံးလည်ပတ်ချိန်တွင်တိုကျို၏အခြေခံလိုအပ်ချက်များကိုအခြေခံအားဖြင့်သိရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်ဒီဂျစ်တယ်အနုပညာပြတိုက်များသို့မဟုတ်အတွင်းပိုင်းစီးဆင်းမှုများမှလှေလှော်ခြင်းကဲ့သို့သောလှပသောအတွေ့အကြုံများရှိသည်။ သို့သော်တိုကျိုကိုသိကျွမ်းလာသည်နှင့်တပြိုင်နက်သင်ပြန်လာချင်သည်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ ပြန်လာပါ ပြန်လာပါ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » မြို့ကြီးများ » Tokio » တိုကျိုမှာဘာကြည့်ရမလည်း